Meizu mBack ma socdo in kasta oo shirkadda soo socota ee telefoonada bezel-ka yar | Androidsis
Furayaasha marin-u-helka jirka ee akhristayaasha faro isku dhafan ayaa ahaa habka loo aqoonsan karo adeegsadeyaal badan ka hor bandhigyada aan xadka lahayn waxay ka mid noqdeen isbeddellada ugu sarreeya adduunka casriga ah. Taleefannada kala duwan, furayaashan guriga ayaa sidoo kale ahaa kuwo shaqooyin badan leh, sida kuwa laga helay dhowr ka mid ah aaladaha Meizu. Furayaasha guriga ee jirka ee casriga ah Meizu ayaa ka mid ahaa kuwa ugu hal abuurka badan maaddaama ay isku darsadeen tikniyoolajiyadda mBack, taas oo u oggolaanaysa dadka isticmaala inay dhex maraan is-dhexgalka isticmaalaha isla markaana ay ku kacaan ficillo deg deg ah iyaga oo adeegsanaya tilmaamaha furaha.
Iyada oo la soo bandhigayo soohdin aan xuduud lahayn, meel uma bannaana furayaasha guriga ee jireed dhinaca hore, laakiin weli Meizu kama tirtiri doono tikniyoolajiyadda mBack sida uu sheegayo madaxa shirkadda, Jack Wong, iyada oo loo marayo bogga bulshada ee shirkadda. Waxay umuuqataa in Meizu 16 uu la imaan doono nooc aad u horumarsan oo teknolojiyadda mBack, laakiin ma noqon doono furaha Guriga. Haddii ay dhacdo inaadan aqoon, nooca ugu dambeeya ee Flyme OS, shirkaddu waxay horey u hirgelisay tikniyoolajiyadda 'Super mBack', oo ka kooban tilmaamno shaashad ah. Thanks to astaantan, waxaa suurtagal ah in si dhakhso leh loogu dhex maro marinka isticmaalaha iyadoo la adeegsanayo qasabado, qasabado dhaadheer, iyo suuf. Marka, adoo tixgelinaya hadalada Jack Wong, waxaa jiri doona wax dhulka dhigaya oo ku saabsan mBack technology oo ku saabsan taxanaha Meizu 16 ee soo socda.
Safka soo-saaraha cusub ayaa si rasmi ah loo soo bandhigi doonaa bisha Ogosto ugu yaraan laba nooc.. Mid ayaa lagu qalabeyn doonaa dhexdhexaad dhexdhexaad ah Qualcomm Snapdragon 710, halka nooca ugu awooda badan uu yeelan doono siddeed-aasaas Qualcomm Snapdragon 845 chip oo ku shaqeeya inta ugu badan ee 2.8GHz. Si ka duwan noocyada kale, Meizu ma aqbali doono naqshadda naqshadeynta isagoo doorbidaya bandhig 18: 9 ah, laakiin jibbaarradu weli wey sii yaraan doonaan. Sidoo kale, sida laga soo xigtay dhowr qodob waxaa ku jiri doona akhristaha faraha faraha shaashadda dusha sare.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Meizu's mBack ma socdo inkasta oo shirkaduhu soo socdaan taleefannada bezel-ka yar